पाकिस्तानकी चर्चित अभिनेत्रीले विवाह बारे दिएको बयानको भिडियो लिक भएपछि दुनियाँभर तरंग
गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » पाकिस्तानकी चर्चित अभिनेत्रीले विवाह बारे दिएको बयानको भिडियो लिक भएपछि दुनियाँभर तरंग
काठमाडौं । पाकिस्तानकी एक चर्चित अभिनेत्रीको भिडियो लिक भएको छ । अन्डरवर्ल्ड डन दाऊद इब्राहिमको प्रेमिकाका रुपमा परिचय बनाएकी महविश हयात पछिल्ला दिनहरुमा बिवाहको बारेमा दिएको बयानको कारण चर्चामा छिन् ।
पाकिस्तानी अभिनेत्री महविश हयातले एक साक्षात्कारमा उनको जीवनसाथीको छनौटको बारेमा बताइन् । महान् कुरा यो हो कि यस समयमा उनको विवाहको लागि उठेको नाम दाऊद इब्राहिम होइन, तर पाकिस्तानको एक ठूलो राजनीतिज्ञ हुन् । यस अवधिमा महविशले त्यस नेताको प्रशंसा पनि गरेकी छिन् ।
महविश आफैले बिलावल भुट्टोको नाम लिइन्
महविशले पाकिस्तानको एक युट्यब च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भुट्टोको नाम लिएकी हुन् । उनले आफ्नो भविष्यको श्रीमानका बारेमा चर्चा गर्दै अग्लो उचाइ भएका केटाहरूलाई मन पर्छ भनेकी थिइन् ।
तथापि, उनले यो पनि भनेकि छिन् कि केटाहरूको रंगले उनलाई कुनै फरक पर्दैन । जब हयातलाई सोधिएको थियो कि यदि उनी हालै पाकिस्तानी राष्ट्रीयसभा सदस्य बनेको व्यक्तिको बारेमा कुरा गरिरहेकी छिन् । महविशले जवाफ दिइन् कि तिमी बिलावलको बारेमा कुरा गरिरहेछौ ?
महाविश बिलावल भुट्टोको प्रशंसा गरिन्
उक्त पत्रकारले अन्तर्वार्तामा भने कि उनले बिलावल भुट्टो जरदारीको बारेमा कुरा गरिन । उनले के म बिलावलसँग तपाईंको विवाहको बारेमा कुरा गरौँ ? भनेर सोधेकी छिन् । महाविशको जवाफ यो थियो कि उनले यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न सक्दिनन् । पछि उनले बिलावलको धेरै प्रशंसा गरेकी हुन् । उनको केही सेकेण्डको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
बिलावल भुट्टो को हुन् ?
बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीको अध्यक्ष हुन् । उनी पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टो र पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीको छोरो हुन् । उनको पाकिस्तानको राजनीतिमा ठूलो नाम रहेको छ । अहिले बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको बिरूद्ध एक प्रदर्शनको नेतृत्व गर्दैछन् । उनी पाकिस्तानको युवामा निकै लोकप्रिय छन् ।
महविशको दाऊदसँग नजिकको सम्बन्ध
केहि मिडिया रिपोर्टमा दावी गरिएको छ कि दाऊदभन्दा २७ वर्ष कान्छी महविश हयात उसकी प्रेमिका हुन् । गत बर्ष यसबारे चर्चा सुरु भएको थियो । पाकिस्तानमा जब महविशलाई नागरिक सम्मान ‘तमगा–ए–इम्तियाज’ प्रदान गरिएको थियो, तब केहि प्रश्नहरु पनि उठेका थिए । भनिन्छ कि दाउदले महविशलाई आइटम गीतमा देखेर फ्लोर गरेका थिए । भनिन्छ कि त्यस पछि उनले महविशलाई धेरै ठूला प्रोजेक्टहरू प्राप्त गर्न मद्दत गरेका थिए ।
‘तमगा–ए–इम्तियाज’ पछि प्रश्न किन ?
पाकिस्तानको सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘तमगा–ए–इम्तियाज’ प्रदानपछि हयातले सामाजिक सञ्जालमा कडा आलोचना खेप्नु परेको थियो । मानिसहरूले उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । तब उनले आफुबिरूद्ध सञ्चारमाध्यमहरुमा एक षडयन्त्रको रूपमा रिपोर्ट गरिएको आरोप लगाएकी थिइन् । उनी फेरि दाउदसँगको सम्बन्धबाट चर्चा र प्रश्नहरुको सिकार बन्न पुगेकी हुन् ।
दाऊदको सहयोगमा फिल्म उद्योगमा छाएको आरोप
महविशले लोड वेडिङ्ग, पञ्जाब नही जाऊगी र ऐक्टर–इन–ल जस्ता फिल्महरूबाट आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएकी हुन् ।
महविशको कराचीका एक प्रभावशाली व्यक्ति, तहरीक–ए–इन्साफ पार्टीका नेतासँग राम्रो सम्बन्ध भएको पनि चर्चा भएको थियो । तर पछि यो दावी गरिएको थियो कि त्यो व्यक्ति दाऊद थिए । दाऊदको भारतका पनि फिल्म उद्योगमा पुरानो प्रभाव कायम रहेको छ । कराची र लाहोरका निर्देशक–निर्मातासँग उनको सम्बन्ध पुरानो रहेको छ ।